नयाँ वर्ष २०२१ को पहिलो दिन विश्वमा कति शिशु जन्मिए ? « Lokpath
२०७७, १७ पुष शुक्रवार २०:१६
नयाँ वर्ष २०२१ को पहिलो दिन विश्वमा कति शिशु जन्मिए ?
प्रकाशित मिति : २०७७, १७ पुष शुक्रवार २०:१६
नयाँ वर्ष सन् २०२१ को पहिलो दिन जनवरी १ का दिन संसारभरी तीन लाख ७१ हजार ५०४ जना जन्मिएको युनिसेफले जनाएको छ । “हजारौँ नयाँ सुन्दर बालबालिकाहरुलाई स्वागत गर्न पाइएको छ, यसले हामीलाई रोमान्चित बनाएको छ,” कम्बोडियाका लागि युनिसेफका प्रतिनिधि फोरुघ फोयौजातले भने ।
गत बर्ष सन् २०२० सवैका लागि चुनौतिपूर्ण बर्ष बनेको थियो, त्यसमा पनि बालबालिकाहरुका लागि झनै चुनौतीपूर्ण भएको थियो, तथापि कम्बोडियाले कोरोनाभाइरसको महामारीमा राम्रो व्यवस्थापन गरेको पाइयो ।” जारी वक्तव्यमा लेखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ)ले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार कोम्बोडियामा यस बर्षको पहिलो दिन ९७१ जना जन्मिएका हुन् । अरु देशको तुलनामा राम्रो व्यवस्थापन भएको अवस्थालाई निरन्तरता दिन कम्बोडिया सफल हुने पनि उनले आशा व्यक्त गरेका छन् ।
कम्बोडियामा जन्मिएका बालबालिकाको भविश्य सुनौलो बनाउनका लागि युनिसेफले पनि सक्दो सहयोग गर्ने उनले आश्वासन दिए । युनिसेफले सन् १९५२ देखि बालबालिकाको अधिकार र कल्याणका लागि कम्बोडियामा समेत काम गरिरहेको वक्तव्य मार्फत जानकारी दिएको छ ।
सन् २०२० मा भने युनिसेफले कम्बोडिया सरकार र यसका साझेदारहरुलाई कोरोनाविरुद्ध लड्नका लागि पनि सहयोग गरेको थियो । विशेष गरेर दुर शिक्षा, विद्यालय सञ्चालन, कोरोनाबाट सुरक्षित गर्न, सफा खानेपानी, पोषिलो खाद्य पदार्थलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गरेको हो ।
१० जना महिलासँग विवाह गर्दा पनि भएन सन्तान, गयो आफ्नै ज्यान !
काठमाडौं । भारतको यूपीस्थित बरेलीमा एउटा अनौठो घटना भएको छ । त्यहाँका एक
मेक्सिको–अमेरिकी सीमा नजिक १९ व्यक्ति मृत फेला
काठमाडौँ– अमेरिकाको सिमाना नजिक मेक्सिकोमा कम्तिमा १९ व्यक्ति मृत भेटिएका छन् । उक्त
ताइवानको समर्थनमा अमेरिका : बाइडेनले चीनलाई दिए चेतावनी !
काठमाडौं । अमेरिकी राजनीतिज्ञको ताइवान यात्राले चीन रुष्ट भएको छ । जसका कारण
नेपालमा माघ १४ गतेबाट भ्याक्सिनेशन शुरु हुने, पहिलो चरणमा चार लाख ३० हजारलाई खोप लगाईंदै
काठमाडौं । नेपालमा यहि माघ १४ गते बुधवारबाट कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन
१० जना महिलासँग विवाह गर्दा पनि भएन सन्तान, गयो आफ्नै…
नेकपाको दुवै पक्षलाई निर्वाचन आयोगले दिएन मान्यता, ओली र प्रचण्ड…
नेप्सेले नयाँ रेकर्ड राख्दा कुन कुन कम्पनीले कमायो ?
भिडियो, लोकपथ हाइलाईट, समाचार, समाज
तथ्यांक विभागले माग्यो ४७ हजार कर्मचारी (भिडियोसहित)
मालपोत कार्यालय कैलालीमा हाकिमको दादागिरी, पत्रकारमाथि हातपातको प्रयास
लजमा बसेका देवर–भाउजू मृत फेला
भक्तपुरमा ३३ वर्षीया महिलामाथि जबरजस्ती करणी